Inkampani kufuneka ingene njani kwiMithombo yeendaba? | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 21, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le yinxalenye 2 yecandelo le-3. Icandelo 1 ibililo Ngaba iNkampani ingena nini kwiMithombo yeendaba? Uxolo ngokulibaziseka kwesi sithuba, bekuyiveki evekini emsebenzini-iiprojekthi ezi-3 zisondela esiphelweni, enye yazo ngaphezulu konyaka!
Ndikhe ndayeka kancinci kuba bekukho ingxoxo enkulu malunga neposti yokuqala, ngakumbi kwifayile ye- Thumela kubantu kwi-Deep Tech Dive:
Kodwa ndibuza umbuzo kaDoug wokuba kufuneka uqale ubandakanye zonke iinkokheli kwinkampani yakho? abo banesicwangciso sobumbano.? Mhlawumbi i-Indianapolis ikwiplanethi eyahlukileyo (Jeff, ungowaseKentucky, ucinga ntoni?) Apho iqela elilawulayo linexesha kunye nokuqonda kweendaba zosasazo ukufikelela kumbaya. Kodwa apha, eyona ndlela ikhawulezayo yokubulala inyathelo elitsha lonxibelelwano kukubamba ukubanjwa kwemvumelwano ekumgangatho ophezulu. Ayisiyonto yokuba imvume yobunkokeli ayibalulekanga, kodwa ukuba phantse ayinakufezekiswa, ngakumbi ngaphambi kokuba ubonise nayiphi na ikhonkrithi ye-ROI.
Ndiphoswe luphawu kule iposti yam: andikhathazeki malunga nesigqibo sokuvumelana kwinqanaba lebhodi. Eyona nto ndiyikhathaleleyo kukunceda ubunkokheli benkampani ukuba baqonde amathuba kunye nemigibe eza kuvela ngokuvula ishishini lakho kwesi sicwangciso. Umbhali uyaqhubeka:
Isicwangciso esincinci sokuqalisa ngamanye amaxesha sisebenza ngcono, ngeendlela ezininzi. Konke okudingayo ngumbhali omnye onomdla, ezinye izixhobo ezingabizi kakhulu, kunye nengxaki yonxibelelwano onokuyilinganisa. Mhlawumbi sisiseko sokufumana ukugcwala ngakumbi kwiWebhusayithi yakho. Okanye ukuphakamisa ulwazi ngezixhobo ezitsha zenkxaso kunye neenkqubo. Okanye ukwandisa umdla wabathengi ngokuxelela ii-anecdotes ezinomdla malunga nendlela abantu bokwenyani abazisebenzisa ngayo iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Ngelixa ndivumayo ukuba oku kuya kubonelela inkampani yakho ngesiqalo esikhawulezileyo kwaye kungabikho xesha laneleyo lokuya 'kwikomiti yemingxunya emnyama', ndiyibonile le ndlela ineziphumo ezibalaseleyo nezibi. Mhlawumbi owona mzekelo ubalaseleyo endiwubonileyo kwesi sicwangciso yayingumhlobo UChris Baggottblog kwi Ukuthengisa nge-imeyile ezona ndlela ziPhambili. Ewe kunjalo, uChris wayenethuba lokuba bobabini babe ngumnini kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso le-ExactTarget, ke kwakulula ukubuyela emva ngelo xesha.
Umbuzo awukho nokuba ibhlog kaChris ibe nefuthe. Inefuthe elimangalisayo! Umbuzo ngowokuba ingaba ufikelele kwisakhono esipheleleyo na kwaye waba nefuthe kwishishini, kwintlangano ngokubanzi, oko nako unayo. UChris wemka NgqoThagethi ukuqala Isiqulatho seBlogware (Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndiye ndanceda uChris ukuba aphuhlise umxholo wokuqala) kuba naye wayekucinga oku!
UChris wafunda iintambo zebhlogi kwiminyaka eliqela kwiTypepad. Ngexesha uChris efumanisa amandla ebhlog kwiNtengiso ye-Injini yokuKhangela, indibaniselwano, njl. Typepad kwaye usebenzise ngokupheleleyo indawo yokubloga. Wayebuyiselwe umva kuyo yonke indawo (usese # 1 Ukuthengisa nge-imeyile ezona ndlela ziPhambili". Kwakukho amanye amagama ambalwa uChris awayengathanda ukuba anxulunyaniswe nawo kwisizukulwana esikhokelayo kwi-ExactTarget, kodwa wayengenandlela yokuqonda ukuba lusuku awathi nje waxhuma waqalisa ukubhloga. Kananjalo ebeya kuthanda ukuba nabanye abantu kwibhlog yombutho-kunye nokudibanisa ifuthe.
Ngubani ukuxelela Njani?
Kungenxa yoko le nto ndingummeli omkhulu wokufumana abacebisi beendaba zeNtlalo ezifanelekileyo kwishishini lakho. Umcebisi omkhulu unokuphonononga izixhobo zakho, ishishini lakho kwaye ufumane izixhobo ezifanelekileyo eziza kulunga kwisicwangciso sakho. Abacebisi beendaba zosasazo basekuhlaleni bayayazi imeko yemidiya yoluntu - kwaye banokukunceda apho ukwenza iqhinga lakho, hayi indlela.
Umntu wakho we-IT unokuba nayo WordPress isebenza kwimizuzu emi-5 (unqakrazo olu-1 lokufaka). Ngaba oko kuthetha ukuba uyayazi indlela yokwakha umxholo wakho wabakhangeli beenjini? Ngaba uyazi indlela yokuyila iipermalinks kunye nezihloko zekhasi zempembelelo ephezulu? Ngaba uyazi ukuba zeziphi iiplagi ekufuneka zibenazo? Hayi, akenzi njalo - kungenjalo uya kuba eqhuba ibhlog yakhe ngempumelelo, ethetha, kwaye ecebisa ecaleni. Le yenye yeendawo apho unokufumana ubuqhetseba ngokupheleleyo ngumoya woMthombo ovulekileyo.
Ndiyawuthanda uMthombo oVulekileyo! Ndiyayithanda iWindowsPress! Ngaba ndingayisebenzisa ukuqala isicwangciso esibanzi seendaba zosasazo lweshishini? Hayi. I-WordPress yinkqubo yolawulo lomxholo yombhali, hayi inkqubo yolawulo lomxholo wenkampani.
Ngubani ilizwi leNkampani yakho?
Rhoqo, isebe lakho lentengiso ayizizo ezakho izixhobo ezifanelekileyo zokwenza iqhinga losasazo loluntu. Abathengisi banomdla omkhulu. Sicinga ngeenyawo zethu kwaye sihlala sinesicwangciso esiliqili sophawu xa sithetha. Ukuba ungena kwinethiwekhi yoluntu kwaye uqala ukulingisa iilingo ezihlala zihlala igcinelwe i-BS Bingo, ngokuzenzekelayo F. Ukuba awucelwanga ukuba ushiye, zilungiselele ukuba inkampani yakho ihlaselwe esidlangalaleni ngokwaphula umthetho-siseko ophambili kwimidiya yoluntu-ukuthembana.
Kukho abantu kumbutho wakho ngoku abakhe ukuthembeka, igunya, kunye nenethiwekhi enkulu kumzi mveliso wabo. Ezo zizidibanisi kunye neempembelelo ekufuneka uzifumene kwisicwangciso sakho!
Inqaku lokugqibela lokuba ungaqala njani. Nceda ungabeki lonke ithemba lakho 'kwingcali' enye. Ingcali ligama elinxulumene noko, ngakumbi ngokubhekisele kwimidiya yoluntu. Iinkampani zitshayela nje umphezulu womhlaba ngoku kwindlela yokusebenzisa eli thuba lingakholelekiyo ukwakha ubudlelwane kunye nokufumaneka kweenkampani zabo. Lumkela amagama agqithisileyo njengawe, konke, akukho mntu, wonke umntu… iqhinga ongabhejeli kulo isenokuba lelona lifumene eyona mpumelelo yakho inkulu.
Fumana abacebisi abambalwa beendaba zentlalo, abantu abaliqondayo ishishini lakho, ishishini lakho, iindlela zakho zokuthengisa, ukwamkelwa kwetekhnoloji yakho kwaye ngubani onokuthi ufundise iqela lakho lobunkokeli kule ndlela intsha inomdla.
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2008 ngo-3: 41 PM
Doug, sonwabile ukubona enye isavenge kuthotho lwakho. Enkosi ngokusombulula inkxalabo yethu malunga nesivumelwano sabaphathi. Siyavuma ukuba iingcali zibalulekile ekuphepheni izigcayiseli kunye nokubona amathuba. Sisihloko esikhulu kwisihlwele sethu sobuchwephesha, ke sinjalo Ukuqhubeka nokugubungela uthotho ngaphezulu McBruBlog. Sijonge phambili kwinxalenye 3! - UDavid